Umehluko phakathi kwe-PMSM Motors neBLDC Motors
Umehluko phakathi kwe-PMSM Motors ne-BLDC Motors Uma kukhulunywa ngomehluko phakathi kwama-PMSM motors nama-BLDC motors, empeleni, ngokwezicelo zesimanje zezimoto, umehluko phakathi kwalaba bobabili awumkhulu kangako, futhi laba bobabili bangashintshwa ngokunye. Ake ngikhulume ngemvelaphi kuqala: P ...
Imoto Ebuza, yikuphi Okunzima Kuwe?
Imoto Ebuza, yikuphi Okunzima Kuwe? 1. Kungani imoto ikhiqiza shaft yamanje? Okwamanje ku-bldc motor shaft-bearing seat-base circuit ibizwa ngokuthi yi-shaft yamanje. Izimbangela zamanje shaft: (1) Amandla kazibuthe angalingani; (2) Kukhona ama-harmonics kumandla okuhambisa ugesi; (3) Umpofu ...
Ukuhlaziywa kanye Nokwelapha Ukwehluleka Kwezimoto Eziqala ze-BLDC
Ukuhlaziywa kanye Nokwelashwa Kwezimoto Eziqala Ukwehluleka Kwezimoto ze-BLDC 1. Amandla kagesi aphansi kakhulu ukuqala i-BLDC Motor. Lapho imoto ye-bldc ingakwazi ukuqala ngemuva kokuxhunywa kwamandla wezigaba ezintathu, izizathu ezingaba khona yilezi: (1) Indlela enqunyiwe yokuxhuma yemoto ye-bldc kufanele ibe yi-delta (△) connectio ...
Izimbangela Zezinkinga Zokushanela Ngezimoto Nezindlela Zokulungisa
Izimbangela Zenkinga Yokushayelwa Kwezimoto zeBLDC Nezindlela Zokulungisa Lapho igebe phakathi kwendandatho yangaphakathi yebhere kanye nomagazini noma iringi engaphandle nekhava yokuphela kukhulu kuno-0.1mm, i-stator ne-Rotor kungahlikihla (kushanele). Lapho i-bore ilula, i-BLDC Motor isengaqala futhi isebenze, b ...
Isayensi Yezimoto 丨 Ukuqonda iBLDC Motor Control Algorithms Isingeniso: Abathengi badinga izinto zabo zasendlini, amathuluzi engadi kanye nemikhiqizo eqhutshwa yimoto ukuthi ibe namandla kakhulu, ibe ncanyana ngosayizi futhi isebenze kahle. Njengemikhiqizo eminingi yabathengi, abathengi nabo balindele lokhu ...
Indlela Elula Nesheshayo Yokwahlulela Ukuthi Imoto ye-BLDC yinhle noma imbi
Isilawuli Sezimoto se-BLDC se-Power Drill, Isilawuli se-BLDC se-Power Drill, Isilawuli Sezimoto se-BLDC se-Hair Dryer, I-FOC BLDC Isilawuli Sezimoto se-Power Drill, I-FOC BLDC Isilawuli Sezimoto se-Vacuum Cleaner, Isilawuli se-FOC BLDC se-Power Drill, nophenyo pricelist